Soosaaristayaasha Xarkaha & Xasaasiyadda Soosaarayaasha - Shiinaha Qalabka Mashiinka Dheecaanka & Makiinadaha Warshadaha
Magaca sheyga cayayaanka Caymiska Clip Gaarka ah 18.5 * 6.8 * 4cm Waxyaabaha Madowga ah ee ABS Model NFF-10 Feature Waxyaabo Cad, oo aad u saxsan markii la qabanayo cayayaanka. Madaxa gacanta ayaa ku qalabeysan godad hawo u leh si uu u ilaaliyo wareegga hawada inta lagu jiro qabashada. Qalabka ABS oo tayo sare leh, oo si sahlan loo isticmaali karo. Naqshad muuqaal ah, oo raaxo leh in la isticmaalo. Xakamaynta qaabka maqasku waa mid raaxo leh oo dabacsan oo qabsan kara. Hordhac Alaabtaani waxaa loo isticmaali karaa oo keliya in lagu nadiifiyo w ...
Qalabka cawska birta ee birta leh
Magaca Badeecada Qalabka birta leh ee birta ah ee Nooca 25cm Qalin NZ-16 Toos ah NZ-17 Elbow NZ-18 Wavy Matless steel Model NZ-16 NZ-17 NZ-18 Muuqaal 25cm (qiyaastii 10inches) dherer ah, oo lagu heli karo mid toosan, qaloocsan iyo waara. qaab. Birta aan tayo fiican lahayn, waara, ma fududa in miridhku dheereeyo, cimri dheer oo adeeg. Naqshadeynta Ergonomic, fudud oo raaxo leh in la isticmaalo. U jarjar dhirta biyaha kuleylka ah si wax ku ool ah, waxyeellona kuma soo gaadhin dhirta ku jirta biyahaaga dhow. Hordhac Gudniinka waxaa la sameeyay ...
48cm qafiifinta bir biriyaha
Magaca badeecada 48cm qafiifinta bir-bir bir-goonida ah Midabbaynta 48cm Qalin NZ-14 Toos ah NZ-15 Elbow Qalabka birta aan caadiga ahayn NZ-14 NZ-15 Muuqaal 48cm (qiyaastii 19inches) dherer ah, oo laga heli karo suumooyin toosan oo toosan. Jumlad tayo sare leh oo tayo sare leh, cimri dheeri ah, cimri dheer adeeg, waxyeello uma leh xayawaannada. Iyada oo la siinayo talooyin si aad uga caawiso inaad alaabta si ammaan ah u qabato adigoon weligaa dib uga dhicin. Hordhac shabeelku wuxuu ka samaysan yahay bir tayo sare leh oo tayo sare leh oo leh qalab tayo sare leh oo lagu sawiray ...
38cm hawo bir ah
Magaca Badeecada 38cm qafiifinta xarkaha birta ah Nooca 38cm Silver NZ-12 Tooska NZ-13 Elbow Qalabka birta aan caadiga ahayn NZ-12 NZ-13 Muuqaalka 38cm (qiyaastii 15inches) dherer ah, oo laga heli karo suumooyin toosan oo qaloocsan. Jumlad tayo sare leh oo tayo sare leh, cimri dheeri ah, cimri dheer adeeg, waxyeello uma leh xayawaannada. Iyada oo la siinayo talooyin si aad uga caawiso inaad alaabta si ammaan ah u qabato adigoon weligaa dib uga dhicin. Hordhac shabeelku wuxuu ka samaysan yahay bir tayo sare leh oo tayo sare leh oo leh qalab tayo sare leh oo lagu sawiray ...
27cm hawo bir ah oo bir bir ah
Magaca badeecada 27cm qafiifka xarkaha birta ah Nooca 27cm Silver NZ-10 Tooska NZ-11 Elbow Qalabka birta nalka NZ-10 NZ-11 Muuqaalka 27cm (qiyaastii 10.6inches) dherer, oo laga heli karo tuubooyin toosan oo qaloocsan. Jumlad tayo sare leh oo tayo sare leh, cimri dheeri ah, cimri dheer adeeg, waxyeello uma leh xayawaannada. Iyada oo la siinayo talooyin si aad uga caawiso inaad alaabta si ammaan ah u qabato adigoon weligaa dib uga dhicin. Hordhac shabeelku wuxuu ka samaysan yahay bir aad u tayo wanaagsan oo tayo wanaagsan leh oo leh ...
Xabbad hurdada habeenkii
Magaca badeecada Tilmaamaha iftiinka Habeenkii 18 * 3.2cm Qalabka Cad ee 'PP Model' NZ-09 Feature Elastic meartial, oo raaxo leh in la isticmaalo. Naqshad sax ah, xayawaanka si adag u hay. Shayga balaastikada ah, ma miridhina. Iftiimin, fududahay in la helo. Hordhac Xarkaha jaleeladu way adagyihiin waxna yeeli maayaan cayayaanka. Qalabka PP oo tayo sare leh, miridhku kuma jiro, waxaa loo isticmaali karaa wakhti dheer. Waa iftiin badan oo si fudud loo isticmaali karo. Isticmaal ballaaran oo ballaaran, oo ay ku jiraan qabashada cayayaanka iyo quudinta.
Xiiq-jeexan oo sareeya
Magaca Badeecada Tuubada-dhererka Tilmaame-Sare ee midabka NZ-07 19cm Buluug NZ-08 24.5cm Waxyaabaha Buluuga ah ee Buluuga ah NZ-07 NZ-08 Muuqaalka Waxaa lagu heli karaa laba cabbir, 19cm (qiyaastii 7.5inches) iyo 24.5cm (qiyaastii 10inches). Balaastiig tayo sare leh, cimri dheeri ah, cimri dheer adeeg, waxyeello uma leh xayawaannada. Midab qurux badan iyo qurux badan. Iyada oo madaxa madaxa lagu gargaarayo si ay gacan uga geyso waxyaabaha si aamin ah adigoon waligaa sibiixin. Madaxa wareega, iska ilaali inaad dhaawacdo waxyaabaha xamaasha leh. Gacanta Ergonomic iyo anti-slider, oo si fudud oo raaxo leh loo isticmaalo ...
30cm qafiifinta birta birta ah
Magaca badeecada 30cm qafiifinta bir-biraha ah Nooca Gaarka ah 30cm Qalin NZ-03 Toosiis NZ-04 Elbow Qalabka birta nalka NZ-03 NZ-04 Muuqaalka 30cm (qiyaastii 12inches) dheer, oo laga heli karo suumooyin toosan oo qaloocsan oo tayo sare leh oo bir aan badnayn, waara, dheer nolosha adeegga, waxyeello kuma laha xayawaannada. Iyada oo la siinayo talooyin si aad uga caawiso inaad alaabta si ammaan ah u qabato adigoon weligaa dib uga dhicin. Hordhac shabeelku wuxuu ka samaysan yahay bir aad u tayo sarreeya oo leh qulqul wanaagsan
20cm hawo bir ah oo bir bir ah
Magaca badeecada 20cm qafiifinta bir-biraha ah Nooca Gaarka ah 20cm Qalin NZ-01 Toos ah NZ-01 Elbow Qalabka birta nalka NZ-01 NZ-02 Muuqaalka 20cm (qiyaastii 8inches) dheer, oo lagu heli karo suumooyin toosan oo qaloocsan oo tayo sare leh oo bir aan badnayn, waara, dheer nolosha adeegga, waxyeello kuma laha xayawaannada. Iyada oo la siinayo talooyin si aad uga caawiso inaad alaabta si ammaan ah u qabato adigoon weligaa dib uga dhicin. Hordhac shabeelku wuxuu ka samaysan yahay bir tayo sare leh oo tayo sare leh oo leh qaabdhismeed wanaagsan oo nadiif ah ...